प्रनाउ श्याम राईलाई पत्र | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर विविध प्रनाउ श्याम राईलाई पत्र
प्रनाउ श्याम राईलाई पत्र
दिनेश जंग कटुवाल
११ माघ २०७७, आईतवार १२:१०
श्रीमान प्रहरी नायव उपरीक्षक श्याम कुमार राई ज्यू
बेनी नगरपालिका-७ म्याग्दी
सर्वप्रथम नबआगन्तुक प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्यूलाई हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन छ । तपाईको म्याग्दी बसाई उल्लेखनीय, उपलब्धि मुलक र गर्व गर्न योग्य होस् कामना गर्छु । तपाईलाई राज्यले जून जिम्मेवारी दिएर म्याग्दी जिल्लाको शान्ती सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पेको छ हामी म्याग्दी वासी पनि उत्साही छौँ तपाईको कार्य कुशलता हेर्नलाई ।
तपाई आसीन पद आम नागरिकको अभिभावक भएको हुनाले तपाई बस्ने कुर्सीलाई केही चासो, गुनासो र अपेक्षा सम्प्रेषण गर्दै छु अन्यथा नलिनु होला । नितान्त आम नागरिकको बिचार हो त्यसैगरी मनन गरिदिनु हुनेछ भन्नेमा आशावादी छु । म्याग्दीको हकमा पछिल्ला घटनाक्रम जसरी घटिरहेको छ त्यसलाई नियाल्दा हामी चिन्तित छौँ ।
तपाईलाई स्मरण गराउन चाहे, केही महिना अगाडि बेनी बजारमा बसोबास गर्ने एक २६ बर्षीय युवा लगभग घर देखि पाँच सय मिटरको दूरीमा रहस्यमय तवरले मृतक अवस्थामा फेला परे त्यो घटना मृत्यु थियो कि हत्या थियो आम जनमानसलाई चित्तबुझ्दो जवाफ प्रहरीले सार्वजनिक गर्न सकेन ।
एउटी अबला नारी प्रहरी निरीक्षकबाट नै घरेलु हिंसामा पर्छिन, मानसिक यातना भोग्छिन् युवतीको इच्छा विपरीत अवैध भ्रुणहत्या नै गराइन्छ । न्यायमुर्तिको स्थानमा बसेको ब्यक्तिबाट नै अन्यायमा परेको भन्दै केही उपाय नलागेपछि ती नारी न्याय दिलाइदिनु पर्यो भन्दै रुदै सामाजिक संजालमा आम जनमानसलाई गुहार माग्छिन् । यस्तो जगन्य अपराध गर्ने प्रहरीलाई प्रहरी प्रशासनले जुन तवरले केस अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यसरी बढाएको देखिएन । उल्टै भावनात्मक अत्याचार गरेको गुनासो पीडित पक्षबाट सुनिन्छ ।
नगरपालिका भित्र नै एउटि ६ बर्षीय बच्ची १५ बर्षीय केटाबाट बलात्कारको शिकार हुन्छिन् । जनप्रतिनिधि र जिल्लाको बरिस्ठ व्यक्तिहरू उपस्थित भएको कार्यक्रममै जातीय विभेद हुन्छ । राजनैतिक आडमा कानुन परिचालित गरिन्छ, खुल्लम खुल्ला नियम कानुनको धज्जी उडाइन्छ ।
कानुनी तहमा भएका व्यक्तिहरुलाई लाचारी बनाइन्छ । म्याग्दीमा सयौं अपराधहरु राजनैतिक आडमा, पैसाको बलमा गुमनाम बनाइन्छ । “ठुलोलाई चैन सानालाई ऐन” भने जस्तै छ । अझै भनौं प्रहरी प्रशासन आम नागरिक जो गरिब छन्, कहि कतै पहुँच पुग्दैन तिनको लागी मात्रै नियम कानुन लाद्न बसेको संस्था जस्तो देखिन्छ । हामी आम नागरिकले कतिपय अवस्थामा सहज, सरल र प्रभावकारी रूपमा प्रहरी प्रशासनबाट सेवा सुबिधा पाउन सकेका छैनौं ।
“प्रहरी मेरो साथी” भन्ने सोच आम गरिब सर्वहारा नागरिकको मनमा छैन । जसरी विकसित मुलुकमा पोसाकमा भएको प्रहरी देख्दा नागरिक सुरक्षीत भएको आभास हुन्छ नेपालको नागरिकको हकमा यस्तो किन हुदैन ? गुनासो छ!!! हामी प्रहरीलाई देख्दा आफू सुरक्षीत महसुस भएको अनुभुती गर्न किन सक्दैनौं!! प्रहरी नागरिकको साथी कहिले होला!! म्याग्दीको हकमा प्रहरी प्रशासन प्रमुखलाई राजनैतिक दलका नेताकार्यकर्ता, यातायात व्यवसायी, ठेकेदार, ठुला व्यापारी र समाजको बरिस्ठहरुले आफ्नो निजि पेवा जसरी परिचालित गरेको देखिन जान्छ ।
राजनैतिक दल सँग आवद्ध अथवा कुनै पहुँचवाला व्यक्तिलाई प्रहरीबाट सामान्य नियम कानुन लागु हुदैन जुन आम नागरिकलाई लागू हुन्छ । सत्य सेवा सुरक्षाणम् मुल मन्त्र बोकेर हिडेको नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य मैले बुझेको र अध्ययन गरे अनुसार प्रहरीले समाजमा शान्ती सुव्यवस्था कायम गरि अपराधको रोकथाम गर्छ । कुनै पनी अपराधीक क्रियाकलापको अनुसन्धान गरि नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने र अपराध गर्नेलाई कामकारबाही गर्नु प्रहरीको काम हो ।
सवारी व्यवस्थापन गर्नु, समुदाय सँग सहकार्य गरेर समुदायलाई भय रहित सभ्य समाजको निर्माण गरि विपत्तमा नागरिकको सहायता गर्नु प्रहरीका काम कर्तव्य हुन् । तर राजनितीक हस्तक्षेपको भाइरसले प्रहरी प्रशासनलाई दुषित बनाउदै छ । कुनै पनि घटना घट्यो, अपराध भयो वा कोहि व्यक्ति अन्यायमा पर्यो भने त्यो व्यक्ति प्रहरी समक्ष त आउँछ तर घटना घटाउने अपराधी, पिडक नेता, बरिस्ठ समाजसेवी र पहुँचवाला व्यक्तिको छत्रछायामा पुगिसकेको हुन्छ ।
र अपराधलाई अतिरंञ्जित गराइन्छ । अपराध टेबुलबाट पखालिन्छ । कठपुतली जसरी प्रहरी प्रशासनलाई खेलाइ दिन्छन् अनन्त नागरिकको अगाडि नेपाल प्रहरी भन्दा यिनै पात्रहरू विश्वासिलो हुन्छन् । यसो हुँदा प्रहरीको विश्वास जनमानसमा रहदैन ।
म्याग्दीको हकमा बरिस्ठहरु बलात्कार जस्तो अपराध पैसाको भरमा बन्द कोठामा मिलाइ दिन्छन् प्रहरी प्रशासनलाई ती पीडित नारीको आवाज सम्म पुग्दैन । तर त्यही घटना आम व्यक्तिले गर्छ भने उसलाई कडा कारबाही हुन्छ । कानुन समान रूपमा लागू हुँदैन । आदरणीय प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्यू म सम्मान गर्छु तपाईको पेशालाइ, म सम्मान गर्छु तपाईको संस्थाको ।
प्रहरी मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी प्रती कर्मनिष्ठ भएर लाग्ने हो भने आधाजसो अपराध स्वत न्यूनीकरण हुन्छ । कुनै चेली बलात्कारको सिकार हुनु पर्दैन । कुनै पनि बाआमाको एक्लो सन्तान कुलतमा फस्दैन । सबै जातजातिमा समानता आउँछ जातीय विभेदको हट्दै जान्छ । सबै नागरिकले आफ्नो मौलिक हक अधिकार सहज र सरल रूपमा पाउछन् ।कुनै पनि चालक मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी दुर्घटना गराउदैन ।
DSP साब म्याग्दीमा यस्तै प्रहरी प्रमुखको खाचो छ जसको कार्य कुशलताले गर्दा आम नागरिक ढुक्कसँग जीवनयापन गर्न सकुन् । भ्रष्ट, कालोबजारी, तस्करी र दुई नम्बरिहरु तर्सिउन प्रहरीको नाम बाट । आशा छ तपाईले यो अनुभुती हामी आम नागरिकलाई प्रदान गर्नुहुनेछ भन्नेमा । मेरो लेखाइबाट तपाई र तपाईको संस्थामा कुनै आँच आए, गल्ती भए क्षमाप्रार्थी छ । मिति: २०७७ माघ ११
पत्र लेखकको निजी विचार हो ।
बेनी नगरपालिका-८ म्याग्दी